Uhlelo Lokudluliselwa Kwe-Isenselogic
Uhlelo Lokudlulisa lwe-SEO NguIsenselogic.com
Isenselogic.com inikeza amakhomishini ophanayo kukho konke ukudluliselwa. Awudingi ukwenza noma yikuphi ukuthengisa- vele usithinte ngokuhola kwebhizinisi elidinga ukwakhiwa kwewebhusayithi noma insiza yokulungiselela izinjini futhi sizokunakekela okunye.
Uhlelo lwethu lokudlulisela lukhokhela i-15% yonyaka wokuqala weklayenti kuwe.
Uma kunenkontileka ekhona, sizokukhokhela phambili. Ngaphandle kwalokho, sizokhipha izinkokhelo zakho njengoba amasheke eza njalo ngenyanga.
Isibonelo, uma ukuhanjiswa kusayina isivumelwano sezinyanga eziyi-6 se- $ 3,000 ngenyanga, lelo isheke lama- $ 2,700 owenzelwe wena, ngaphambili. Futhi inkokhelo yakho izofinyelela ku- $ 3,600 uma iklayenti linquma ukuqhubeka nenkonzo ngaphezu kwenkontileka yalo yokuqala, iningi lamakhasimende ethu liyakwenza. Ngenye indlela, iklayenti lingasayina isivumelwano sezinyanga eziyi-12 ku- $ 5,000. Lokho kusho isheke lama- $ 9,000 elibhalwe igama lakho!
Izindawo Zokuthola Ukudluliselwa
Izindawo Zokukhangisa Zensangu Yezokungcebeleka Nezokwelapha
Abameli Namahhovisi Odokotela
Amabhizinisi omndeni noma abangane.
Amaklayenti akho, noma amaklayenti wefemu yakho.
Abathengisi abane-SEO empofu nokuqukethwe.
Noma yiliphi ibhizinisi lasekhaya elifuna ukuba sekhasini lokuqala le-Google, futhi yilokho BONKE.
Ukuhola okungalingani kahle kwenkampani yakho.
Noma yikuphi ukuxhumeka okungazuza kumikhombandlela ehlosiwe.
Isinyathelo 1: Sayina isivumelwano sohlelo lwethu sokuphinda uthumele
Sebenzisa irejista yethu ifomu lokuhola noma uthintane ukuxoxa ngesingeniso esifudumele.
Isinyathelo 2: Bheka Ukuhola
Isinyathelo 3: Khokhelwa
Lapho uphawu lokuhola nathi, uyakhokhelwa. Kulula kanjalo.
Sinikeza ngezinto zokuqeqesha ukukusiza wenze imali eningi.
Wonke amabhizinisi kuwo wonke amadolobha emhlabeni angaba ngumthombo wemali ongawuthola wena nomndeni wakho. Ungasebenzisa lolu hlelo uma usebenza ekhaya noma njengemali engenayo eyengeziwe uma unomsebenzi.
I-imeyili Support@isenselogic.com enegama lakho nenombolo yocingo ukuze uthole ikhophi lesivumelwano sethu sokudlulisela futhi ukulungele ukuya!
Sinezibonelo eziningi zamakhasimende ethu amanje ongaqinisekiswa.